Sebebasa izinkuni abakhala ngogesi obizayo | News24
Sebebasa izinkuni abakhala ngogesi obizayo
Umphakathi waseTransit area ku-ward 23 ubhikishe wavala umgwaqo ngoMsombuluko ukhala ngogesi obizayo. Isithombe: Lethiwe makhanya
BAMISE yonke into abahlali baseTransit area ngaphansi kwaka-ward 23 ngoMsombuluko njengoba bedinwe bavala umgwaqo ngamathayi avuthayo, amatshe, amabhodlela kanye nodoti.
Labahlali bavale umgwaqo omkhulu u-Edendale road kanye nomgwaqo ongenela ku-FJ Sithole eMbali. Lomphakathi ukhala ngogesi obizayo nabathi njalo uma bethenga ugesi esitolo babanjelwa u-40% walowogesi abawuthengile. Lesiteleka sidonse cishe usuku lonke njengoba nantambama kuphinde kwaqalwa phansi kwavalwa umgwaqo.
Uqhube wathi lenkinga iqale ngenyanga kaSepthemba ngonyaka owedlule ngesikhathi benikezwa izigubhu zikagesi ezincane ezisetshenziswa njengomakhalekhukhwini.
UNkk Busisiwe Khanyile ongumhlali utshele i-Echo ukuthi yena ubethenga ugesi ka-R200 inyanga yonke kodwa manje awusaqedi ngisho isonto.
“Uma uthenga ugesi ka-R100 uthola uR40. Uthi uma uwufaka uhlale usuku olulodwa bese uyakhala ukutshele ukuthi usuyaphela. Mina bengithenga ugesi ka-R200 inyanga yonke ngiwusebenzisa nezingane zami kanye nabantu abaqashile kodwa manje sekumele sihleli sithenga njalo,” kubeka yena.
Lo mphakathi uthi ukhathele ilo gesi ufuna ukubuyiselwa ugesi wawo wakudala ngoba umasipala udlala ngathi. “Seloku kwaqala lento yalezigubhu ezincane akukho nje okulungile. Sesitheza izinkuni sibase zona manje ngoba ayikho into esizoyenza. Sifuna ukwazi ukuthi yini esiyikhokhelayo ngoba umasipala awukazi usazise ngisho ukusazisa .”
Amaphoyisa kudingeke ukuba asebenzise isisa esikhalsia unyembezi ukuhlakaza isixuku, kodwa umphakathi ubungapheli mandla njengoba ubuqhubeka ubhikisha ubasa umlilo emgwaqeni. Labahlali abagcinanga ngokuvala umgwaqo kuphela kodwa bajikijele ngamatshe ihhovisi lakamasipala uMsunduzi elikulendawo.
Akulimalanga nje kuphela ihhovisi kodwa nezimoto zabantu ebezithi zizodlula kulomgwaqo bezishaywa , kwaphinda kwakhishwa nama-robots ku-Edendale road.
Okhulumela amaphoyisa esiteshini iPlessislaer uKapateni Musa Ntombela uthe kuvulwe icala lokudala udlame emphakathini kodwa bekungakaboshwa muntu.